Dowlada Soomaaliya oo shir caalami ah uga qayb galaysa dalka Sudan. – The Voice of Northeastern Kenya
wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlada Fderaalka Soomaaliya dr Fowsiya Abiikar Nuur ayaa ka qayb galaysa Shirka 65-aad ee hay’ada caafimaadka aduunka WHO oo ka socda magaalada Khartuum ee dalka Sudaan.
Shirkaas oo socon doona ilaa 18-ka bishan ayaa qodobada looga hadlayo waxaa ka mid ah wax ka qabashada cudurada faafa, bixinta adeegyo caafimaadka oo wanaagsan, sidii ay hay’adaha gaarka loo leeyahay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta caafimaadka iyo daryeelka bulshada.
Wasiirka wasaarada caafimaadka Soomaaliya Ditoorayso Fawsiya Abiikar Nuur ayaa loo doortay ku xigeenka shir gudoonka, waxaana ay ka hadashay dadaalada horumarineed ee dawladda Soomaaliya ku doonayso sare u qaadida adeegga caafimaadka, waxayna ka qaybgalayaasha madasha ka codsatay in arintaasi lagu gacan siiyo.
← Ethiopian Airlines oo 40 sano kadib bilaabaysa duulimaadka Muqdisho iyo Adis-ababa.
Ololaha talaalka cudurka dabeesha oo dhawaan ka bilaaman doono qaar ka mid ah ismaamulda dalka →